Ọgwụ iji gaa Brazil: Gbochie ọrịa na ịnụ ụtọ njem ahụ | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Brasil, Atụmatụ
Ikwu okwu banyere ọgwụ mgbochi iji gaa Brazil pụtara ịme ya consejos, ọ bụghị nke ibu ọrụ. Nke a pụtara na gọọmentị Brazil achọghị ụdị ọgwụ mgbochi ọ bụla iji banye mba ahụ. Ewezuga ihe achọrọ sitere na ọrịa a (lee lee edemede na ụkpụrụ ndị a site na mba), Enweghị ọnọdụ ịdị ọcha nke iwu iji leta Rio de Janeiro ala.
Agbanyeghị, ị kwesiri iburu n'uche na Brazil bụ mba nke ise kachasị na ụwa. O nwere ihe karịrị nde kilomita asatọ na-agụnye nnukwu ọdịiche dị iche iche ma ihu igwe na ala. Ya mere, ọ na-ukwuu tụrụ aro na nata ọgwụ mgbochi ụfọdụ iji gaa BrazilKarịsịa ma ọ bụrụ na ị na-aga mpaghara ụfọdụ.
1 Ọgwụ iji gaa Brazil, ihe karịrị nkwanye
1.1 Ogwu ogwu ogwu
1.3 Vaccineba ọcha n'anya A ogwu
1.4 Vaccineba ọcha n'anya B ogwu ogwu
1.5 Mgbochi MMR
2 Nlekọta ndị ọzọ na njem ị na-aga Brazil
Ọgwụ iji gaa Brazil, ihe karịrị nkwanye
Dị ka anyị na-ekwu, mba South America dị ukwuu ma gụnye akụkụ dị mma nke Amazon. Ya mere, ị gaghị achọ otu ogwu ahụ ma ọ bụrụ na ị gaa na nke abụọ dị ka a ga - asị na ị na - eme ya Rio de Janeiro, ọmụmaatụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ọtụtụ n'ime ha ka akwadoro ya n'agbanyeghị ókèala ị gara. Ma ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha ga-emerụ gị ahụ, yabụ na ị gaghị efunahụ ihe ọ bụla site na itinye ya na izere ihe ize ndụ nke ọrịa ndị dị ize ndụ. Inwere ike ịrịọ oge atọrọ iji zere onwe gị na nke ọ bụla ebe ogwu mgbochi mba ofesi nke Mịnịstrị nke Ofesi nke Spain na njikọ a. Ma, na-enweghị oge ọzọ, anyị ga-agwa gị gbasara ọgwụ mgbochi iji gaa Brazil nke akwadoro.
Ajọ aedes aegypti, ihe kpatara ọrịa na-acha odo odo
Nke a bụ ụdị ọrịa a na-ahụkarị na mba South America na, ruo nso nso a, ndị isi ya chọrọ ka a gbaa ya ọgwụ mgbochi tupu ya abanye mba ahụ. Yellow fever bụ nnukwu ọrịa na-efe efe nke anwụnta na-ebute site na aru ya. Aedes aegypti, nke a na-akpọkwa anwụnta mummy.
Ahụhụ a na-ebunye ndị mmadụ ihe ndị ahụ ọrịa dengue, dị ize ndụ karị, ebe ọ na-enweghị ogwu. Mana, ịlaghachi n’anwụ na-acha odo odo, ihe mgbaàmà ya bụ, kpomkwem, ahụ ọkụ, isi ọwụwa na azụ mgbu, ọgbụgbọ na ọgbụgbọ. Ọ bụrụ na agwọghị ya n’oge, onye ọrịa ahụ amalite itolite jaundice (ya mere, ọ bụ nkọwaa odo) na-ata ahụhụ site na oruru ọbara. Akụkụ nke abụọ a na-eweta ọnwụ nke ihe dịka 50%.
Ya mere, ọ bụ ọrịa dị oke njọ. Ma, ebe ọ na-efu gị ihe ọ bụla iji nweta ọgwụ mgbochi, ndụmọdụ anyị ma ọ bụrụ na ị gaa Brazil bụ na ị na-eme ya oge niile iji nwee udo. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ị gaa Amazon, cheta na ogwu a anaghị echebe gị pụọ na ndị ahụ e kwuru n'elu ọrịa dengue. Yabụ uwe ogologo aka ma were ọgwụ anwụnta na-egbu egbu.
Gba ọgwụ mgbochi
N'adịghị ka nke gara aga, a na-arịa ọrịa a mgbe nje Clostridium tetani na-ebute ọnya. Dị ka ị maara nke ọma, enwere ike ịmepụta nke a n'ụzọ dị mfe, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị gaa mpaghara ọhịa Brazil. Ikwesiri iburu n'uche na ahuru nje ndi ahu ekwuru n’elu elu ọ bụla metọrọ emetọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ dịkarịsịrị na ọla edo oxidized.
Ya mere, ọ gaghị esiri gị ike izute ya. N'aka nke ya, onye klochieidium na-esite neurotoxins nke na-emetụta usoro ụjọ niile. Ihe mgbaàmà ya bụ spasms, ime mkpị ike na-eme ihe ike, ikwesi olu ike na ọbụna mkpọnwụ. Ha na-esochi ahụ́ ọkụ, ọsụsọ gabigara ókè, na ịza aza.
E wezụga nhụjuanya ọ na-akpata, ọ bụrụ na e meghị ya n'oge, ọ nwere ike ịnwụ. Ya mere, dịka anyị dụrụ gị ọdụ na mbụ, ị ga-efunahụ ihe ọ bụla site na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa a.
N’aka nke ọzọ, ọgwụ mgbochi tetanus na-agụnyekarị nke diphtheria na nke Ukwara-nta, akwadoro maka ịga Brazil. Nke mbụ bụ ọrịa na-efe efe nke a na-ebute n'ọnụ, karịsịa site na ụkwara ma ọ bụ na-amị. Ọ bụ oku kpatara ya Klebs-Löffler bacillus ọ nwere ike bụrụ ihe kacha njọ na ụmụaka.
Banyere ụkwara nta, ọ bụkwa ọrịa na-efe efe nke nje na-ebute Bordetella pertussis. Ihe e ji mara ya bụ ụkwara mmiri na-efe efe ma na-efe efe. Dị ka nke gara aga, ọ na-emetụta ụmụaka karị. Agbanyeghị, belụsọ ma ọ kpatara nsogbu, ọ na-agakarị ọfụma.
Vaccineba ọcha n'anya A ogwu
Kwụ n'ahịrị iji nweta ọgwụ mgbochi
Nke a bụkwa ọrịa na-efe efe, nke na-akpata mbufụt nke imeju. Ọ na-emepụta, kpomkwem, site ịba ọcha n'anya A virus ma ọ bụ Paramyxovirus dị 72 na ọ dị obere karịa ụdị ndị ọzọ nke otu ọrịa a anyị ga-agwa gị.
N'ezie, ọ gaghị abụ nke na-adịghị ala ala ma ọ bụ kpatara mmebi imeju na-adịgide adịgide. Ma enwere ike bute ya ọfụma, ebe ọ bụ na a na-ebute ya site na ya nri ma ọ bụ mmiri rụrụ arụ, nakwa site na ebe na-adịghị ọcha. N'ihi nke a, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị na-akwọ aka gị ugboro ugboro, ihe na-enweghị mgbagha, ga-ada gị nke ọma n'ihi coronavirus.
Ma, n'ezie, anyị na-akwado ka ị gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa ịba ọcha n'anya A. A na-egbochi ya n'ime ọgwụ abụọ na ọnwa isii iche. Ọ dị mfe ịga Brazil, yabụ ị kwesịrị ịtụle ịnata ọgwụ mgbochi ahụ n'oge dị mma. Iji mezuo ya, ị ga-achọ ọnwa isii ị gafere, dịka anyị siri kwuo.
Vaccineba ọcha n'anya B ogwu ogwu
Patba ọcha n'anya B nje
Anyị nwere ike ịgwa gị gbasara ọrịa a otu ihe ahụ anyị gosiri maka ịba ọcha n'anya A. Agbanyeghị, modality B bụ ka dị ize ndụ, ebe ọ bụ na ọ nwere ike igbanye ọrịa na-adịghị ala ala na nke a, n’aka nke ya, nwere ike ibute ọdịda imeju, oke ime cirrhosis ma ọ bụ ọrịa imeju.
Agbanyeghị, n'ọtụtụ oge, ọ dịghị njọ. Mana o nwere ike were ọnwa anọ tupu mgbaàmà ahụ apụta site na mgbe ị butere ya. N'okwu a, a na-ebufe ya site na aru aru. Dịka ọmụmaatụ, ọbara ma ọ bụ ọbara ọbara, ma ọ bụghị site na ụkwara ma ọ bụ na-akwacha.
Na mgbakwunye, n'ụzọ megidere ihe na - eme ọrịa ndị ọzọ, ịba ọcha n'anya B na - adịkarị mfe ndị na-eto eto karịa na isi. N'ihi ya, ọ kachasị mma ịgba ọgwụ mgbochi tupu ị gawa Brazil. N'okwu a, antigen nwere ọgwụ abụọ ma ọ bụ atọ enyere, n'otu aka ahụ, yana nkeji nke ọnwa isii.
Nwata na anata ogwu MMR
Nke a bụ aha enyere onye na - egbochi ọrịa dịka otiti, owu oriọọn̄ inu me lek kinyi. Nke mbu bu oria nke udiri ndi mmadu, ya bu, o na-acha uhie uhie na akpukpo aru, nke oria ojoo kpatara, karia nke ezinulo paramyxoviridae. Ihe ọzọ na-egosi na ọrịa a bụ ụkwara, ọ bụrụ na ọ kpalite ụbụrụ, ọ ga-adị oke njọ.
Ma rubellaỌ bụkwa ọrịa na-efe efe nke na-egosipụtakwa na akpụkpọ anụ na-akpata site na nje virus. N'okwu a, a na-ebufe ya site na uzo ikuku ọ na-ewe n’agbata ụbọchị ise na ụbọchị asaa iji gosipụta onwe ya, mana ọ na-efe efe. Otú ọ dị, ewezuga ndị inyom dị ime, ọ dịghị njọ. N'ime ihe ndị a, ọ nwere ike imebi embrayo na-emebi mmebi na-adịgide adịgide.
N'ikpeazụ nke parotitis ọ bụkwa ọrịa a na-enwekarị. Ọ ga-abụ na aha ya agaghị ada gị. Mana, ọ bụrụ na anyị agwa gị ihe ha bụ mumpsHeard nụla banyere ha. A na-ebufe ya site na Mumps myxovirus, ọ bụ ezie na e nwekwara ụdị ọzọ nke nje na-akpata. Obughi kwa oria ojoo ka ogwogwo. Ma ọ bụghị ya ma na oke ikpe ọ nwere ike ibute ọrịa meningitis, pancreatitis ma ọ bụ infertility in men.
Mgbochi MMR na-egbochi ọrịa ndị a niile ma nye ya na ọgwụ abụọ na izu anọ iche.
Nlekọta ndị ọzọ na njem ị na-aga Brazil
Ndị anyị kọwara gị bụ ọgwụ mgbochi iji gaa Brazil nke ndị ọkachamara kwadoro. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị tinye ha ma ọ bụrụ na ị ga-eme ya. Mana, na mgbakwunye, a na-atụ aro ka ị gbasoo usoro ndị ọzọ na njem gị ka ahụike gị ghara imebi.
Nzọụkwụ mbụ bụ ka ị banye maka Ndebanye aha ndị njem nke Mịnịstrị nke Ofesi na ị were ego a mkpuchi ahụike mkpuchi. Buru n'uche na Nchebe Ọha na Spanish anaghị adaba na Brazil. Yabụ, ọ bụrụ na ị daa ọrịa, mmefu niile ha ga-agba ụgwọ gị. Ma nke ahụ gụnyere ụlọ ọgwụ, ọgwụgwọ na mbulaghachi.
N'aka nke ọzọ, ihe niile dị ndụ na-atụ aro na, mgbe ị na-a drinkingụ mmiri, ị ga-a onlyụ ya karama jijiji, site na mmiri ma ọ bụ iyi. N'otu aka ahụ, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ị ga-eri kwesịrị ịbụ nke ọma na-egbu nje.
Banyere osimiri, gbaa mbọ hụ na emetọghị ha. Gbanye Sao Paulo y Santa Catarina enwere ọnụọgụ ole na ole ebe amachibidoro ịsa ahụ. Na ọgwụ, were ha na Spain iji zere ịchụpụ ha. Agbanyeghị, enwere ike enyocha ha maka ya n'ọdụ ụgbọ elu mgbe ị batara. Ya mere, anyị na-akwado ka ị weta nri ma ọ bụ akwụkwọ na-egosi na ị na-ewere ha.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, anyị na-akwado ka ị gaa weebụsaịtị nke Ozi nke Mba Ọzọ iji dokwuo anya ihe niile ị ka na-eche.
Ke akpatre, anyị gwara gị banyere ihe niile ọgwụ mgbochi iji gaa Brazil kwadoro site na ndị ọkachamara. Ọ dịghị onye nwere mmetụta ọ bụla, yabụ anyị na-adụ gị ọdụ ka itinye ha. Ma, ọ bụrụ na ị ka na-enwe obi abụọ, ọ dịkwa mma ka ị kpọtụrụ dọkịta gị. Yabụ, ị ga-eme njem n'enweghị nsogbu wee bie ndụ a ahụmahụ pụrụ iche na ọ dịghị ọrịa nwere ike imebi gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Brasil » Ọgwụ iji gaa Brazil